Umatshini wokugaya umbona ngenjini yedizili yokugaya umbona
Umatshini wokugaya umbona unokukwazi ukwenza umbona,ingqolowa,peanut, irayisi kunye nesoya,ipelepele,iziqholo,kunye nesiqu sesityalo esomileyo, iinkuni zomlilo, ingca yerayisi, i-clover, iqokobhe lekhamba, I-husk yerayisi njl .Isiqingatha sokugqibela sezinto ezisetyenzisiweyo singalungiswa ngokweemfuno zabathengi. Lo matshini wokudaya umbona we-dizeli wenziwe ngesakhiwo esinyeneyo,indawo eseleyo yomatshini wokunyusa umbona yamkela ngokupheleleyo izinto ezisemgangathweni, Ukukhuphela iinxalenye zamkele iimveliso zekhaya ezigqwesileyo. Lo matshini wegriza yombona unokulingana nesakhelo ,amavili ngokweemfuno zakho .Sinomatshini wokudibanisa umbane wedizili yokugaya umbona eKenya,kwaye abanye abathengi banomdla kakhulu kumatshini wokugaya umbona we-dizeli,njengeSenegal ,Gambiya,Mali,IBurkina Faso,ISierra Leone,Gana,ENigeria njl.
Inzuzo yomatshini wokugaya umbona
1.Olu hlobo lomatshini wokukhulisa umbona lisetyenziswa ngokubanzi kuzo zonke iintlobo zesikhondo sesityalo, iinkuni zomlilo, ingca yerayisi, i-clover, iqokobhe lekhamba, irayisi husk ikotoni yembewu yoboya, njl.
2 Olu luhlu lomatshini wokugaya iinkozo zombona unethuba lokubumbeka, yomelele kwaye iqinile, ikhuselekile kwaye inokuthenjwa, ukusebenza okulula,lula ukusebenzisa .
3 Ingxolo ephantsi kunye nomatshini wokugaya umbona, ukusebenza okuphezulu kunye nokusetyenziswa okuncinci kwamandla. Ngomngxunya wokuphonsa kabini ukudibanisa izinto.
4.Zombini i-coarse kunye nokugaya kakuhle kunokufezekiswa ngokulungelelanisa i-mesh yesikrini somatshini wokugaya umbona.
Ukusebenza Umgaqo womatshini wokugaya umbona
Umatshini wokugaya umbona wamkela ukuvela kwempembelelo, Izinto ezingaphakathi kwigumbi lokutyumza emva kokujikeleza okuphezulu kwesando kuchotshoziwe, imveliso egqityiweyo incinci kunobungakanani be-mesh, ukuhamba komoya okuveliswa yisiporho ukuvuthela umgubo.
Lo matshini wokugaya umbona unokuphawuleka ,Senze umatshini wokugaya intsimbi engenasinyithi omnye wabathengi bethu.
Iiparamitha zobugcisa kumatshini wokugaya umbona
(kw) Injini yedizili